Lithium Polymer bateria trano, mpamatsy - China Lithium Polymer mpanamboatra bateria
Batterie Lithium Polymer
Ny bateria Fitaovana herinaratra
Battery batterie karazana
Batterie karazana fanavakavahana
Firafitry ny orinasa
Fomba fanaraha-maso kalitao
103450 1800mAh-Smart saron-tava
Kalitao avo lenta 18650-4s 14.8v 3400mAh Recha ...
Factory vidin'ny UL nekena 22.2v 900mah fanadihadiana devi ...
Ny bateria matotra CPAP miaraka amin'ny fananganana herinaratra amin'ny alàlan'ny ...
Fivarotana mafana 36V 9AH / 10Ah / 13.6Ah / 17Ah 20Ah lithium ion r ...
Ny varotra bateria dia mivarotra mivantana 5000mah 3.7v li-ion 2 ...
Hanavao ny Li-po Battery 35R-6000 6000mAh 3.8V Sela Bataly ho an'ny Speaker Bluetooth, kilalao, Robot elektronika, finday, POS, Express Smart Mini Printer
Ny bateria PLM-35R-6000 3.8V 6000mAh azo ampiasaina indray dia mampiasa fitaovana tsara indrindra misy fahaiza-manao avo lenta ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Li-po Battery 605264 2300mAh 3.7V Battery Cell ho an'ny mpandahateny Bluetooth, Kilalao, Robot Elektronika, POS
： Ny batisan-tsarimihetsika PLM-605264 3.7V 2300mAh dia mampiasa ny fitaovana tsara indrindra ary misy fetrany avo lenta mety ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Li-po Battery A7 2100mAh 3.7V Battery Cell ho an'ny mpandahateny Bluetooth, Kilalao, Robot Elektronika, Saron-tava Smart
Ny bateria PLM-A7 3.7V 2100mAh azo averina ampiasaina dia mampiasa fitaovana tsara indrindra misy fahaiza-manao avo lenta ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Li-po Battery NP-FZ100 7.2V 2280mAh Battery cell ho an'ny POS, Fakan-tsary
Ny bateria PLM-NP-FZ100 7.2V 2280mAh azo ampiasaina indray dia mampiasa fitaovana tsara indrindra misy fahaiza-manao avo indrindra ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Battery Li-ion azo esorina 2500mAh portable NFC tablette POS Mobile Payment Terminal POS
Ny bateria PLM-XK-6019 3.7V 2500mAh azo ampiasaina indray dia mampiasa fitaovana tsara indrindra misy fahaiza-manao avo indrindra ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
335074 3.7v 1550mah azo averina akora bateria Li-po ho an'ny thermometer
Ny bateria PLM-335074 3.7V 1550mah rechargeable dia mampiasa fitaovana tsara indrindra misy fahaiza-manao avo indrindra ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Volafotsy avo lenta 7.4V 1800mAh LP-E6 batterie li-po azo ampiasaina indray ho an'ny mpitam-boky mpampihatra polisy
Ny batterie PLM-LP-E6 7.4V 1800mAh azo ampiasaina dia mampiasa ny fitaovana tsara indrindra miaraka amin'ny fatrany avo indrindra mety ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Làlana roa SC2F 7.4v 2000mAh Polymer Lithium Battery Rechargeable Battery Packer ho an'ny radio Micro Talk Radio Pack, kilalao, robotika elektronika, Fitaovana fanamafisana ny lalàna.
Ny batterie PLM-SC2F 7.4V 2000mAh azo ampiasaina dia mampiasa ny fitaovana tsara indrindra miaraka amin'ny fahaiza-manao avo indrindra azon'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Volkano avo 3.8V 1700mAh 803048-2P batterie li-po azo ampiasaina indray ho an'ny mpitam-boky mpampihatra polisy
Ny batterie PLM-803048-2P 3.8V 1700mah dia mampiasa fitaovana tsara indrindra miaraka amin'ny fatrany avo indrindra mety ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Li-po Battery NP-BX1 3.7V 1400mAh Battery Cell ho an'ny POS, Fakan-tsary
Ny bateria PLM-NP-BX1 3.7V 1400mAh azo ampiasaina indray dia mampiasa fitaovana tsara indrindra misy fahaiza-manao avo indrindra ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Li-ion Battery 1600mAh azo tsapain-tanana finday NFC tablet PDA 2D barcode scanner miaraka amina boaty POS
Ny batterie PLM-T8601 3.7V 1600mAh dia mampiasa fitaovana tsara indrindra miaraka amin'ny fatrany avo indrindra mety ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Li-po Battery V9 1800mAh 3.7V Battery Cell ho an'ny mpandahateny Bluetooth, kilalao, Robot elektronika, fitaovana fanamafisana ny lalàna
Ny bateria PLM-V9 3.7V 1800mAh azo averina ampiasaina dia mampiasa fitaovana tsara indrindra manana fahaiza-manao avo indrindra azo atao ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
12345 Next> >> Pejy 1/5
Rihana 5, Trano 6, Valan-javaboary Dongfanghong, lalana Yushi, guanlan, Long Hua, 518109 Shenzhen China